BARADHADA "TULEYEVSKY": SHARAXAAD KALA DUWAN, SAWIRO, BEERTO IYO DARYEEL - MAQAALLO
Baradhada "Tuleyevsky": dabeecadaha, beerashada agrotechnics
Baradhada "Tuleyevsky" - waa noocyo badan oo ka mid ah dhinacyada ganacsatada iyo qoysaska gaarka ah. Waa mid midho baddan oo fudud oo nadiif ah. Dalagyada xididku uma baahna xaalado gaar ah beerashada, laakiin ma dhaawici doonaan si ay u bartaan dhamaan sifooyinka kala duwan ee hore.
Kala duwan ayaa la soo raray by curinta ee Machadka Baaritaanka Kemerovo (Siberia). In la abuuro hybrid "ka qayb qaatay" ma aha oo kaliya Russia, laakiin sidoo kale ka Kanada. Hawlgalka oo dhan wuxuu socday ilaa 10 sano. Geelku wuxuu magaciisa ku helay sharaf ka mid ah guddoomiyaha gobolka A. Tuleyev, oo hayay boostada muddo ka badan 20 sano. Waxaa loo keenay Diiwaanka Gobolka sanadkii 2006.
"Tuleevsky" waxaa loo sameeyay si gaar ah beerashada xaaladaha cimilada ee cimilada, laakiin waxay noqotay mid caan ah gobollada kale, oo ay ku jiraan Yurub.
Ma taqaanaa? Baradhadu - khudradda koowaad ee adduunka, kaas oo lagu kobciyay eber eber (sannadkii 1995).
Qaabka iyo isdhexgalka ee baadiyaha ayaa ka dhigaya noocyada kala duwan ee aad u daryeeli karto.
Tuberku wuxuu leeyahay qaabka ovalaha iyo jaalaha ah, maqaarka adag. Indhaha, sida caadiga ah, aad u yaryar oo marar dhif ah ayaa laga helaa. Inside ee tuber waa huruud ah-beige, dhafka ah cufan, dhadhan waa macaan. Hal miro ayaa miisaamaya celcelis ahaan 250 g, lakiin waxaa jira walxo nus-nus ah. Heerka xaydhuhu kama badan karo 17%.
Ogow marka ay ugu fiican tahay in lagu beero baradhada dhulka oo furan iyo haddii ay suuragal tahay in la beero baradho xilliga jiilaalka.
Beeraha dhirta waa qumman yahay, hooseeya oo xoog badan. Heerkulka celceliskiisu waa 35 cm Cawska cagaaran ee dhexdhexaad ah ayaa cidhiidhi gaaban ah. On kasta baadiyaha - ilaa 6 caleemaha dhinaca. Inta lagu jiro xilliga ubax waxay ubaxyada ubaxyada ubaxyada leh ku dhuftaan dhexda dhexe iyo huruudka cad.
Noocyada Tulegsku waxay si fiican u heleen sababtoo ah isku-dhafka gaarka ah ee dabeecadaha.
Baradhadu waxay ka difaacayaan cudurrada soo socda:
Intaa waxaa dheer, dhirta waa mid dhexdhexaad ah u ciribtiraatada goor dambe iyo cudurada viral.
Waa muhiim! Kala duwanaantu waxay u nugul yahiin caabuqa nematode dahab ah.
"Tuleyevsky" - baradhada bartamihii bartamihii. Waxay noqotaa mid aad u bislaaday 100 maalmood ka dib markii la beero. Laakiin waxaad soo qaadan kartaa goosashada maaddo laga soo bilaabo maalinta 60aad.
Cunto ugu sarraysa kala duwanaanta 1 ha waa 50 tan. Celcelis ahaan, waxaad heli kartaa 40 tan hektar. Marka la eego beerashada isticmaalka shakhsiyeed, ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu ku dari karaa qiyaastii 5 kg oo dalag ah oo ka soo deynaya baadiyaha.
Ku soo dhawow waxyaalaha gaarka ah ee beerashada baradho iyadoo la isticmaalayo farsamada Dutch.
Heerka baradho "Tuleevsky", sida caadiga ah, kama hoos dhaco calaamadda 90%. Waxay u adkaysantaa waxyeellada farsamada, markaa wax dhibaato ah ma jiraan inta lagu jiro gaadiidka.
Sida hore loo xusay, noocyada kala duwan ee loogu talagalay beeritaanka jawi ba'an, laakiin marka la beeray gobollo kale, dhibaatooyinka sidoo kale ma soo baxaan. Waxaa ku habboon beeralayda Jamhuuriyada El Mari, Udmurtia, Chuvashia, Altai, Buryatia, Yakutia, Tyva iyo Khakassia, dadka deggan Transbaikalian, Khabarovsk, Primorsky, Perm iyo Krasnoyarsk Krai, iyo sidoo kale Kirov, Nizhny Novgorod, Sverdlovsk, Kemerovo, Novosibirsk, Omsk, Tomsk, Tyumen, Irkutsk, Amur, Kamchatka, Magadan iyo Sakhalin.
Baradhadu "Tuleyevsky" laftiisa uma baahna xaalado koboc oo gaar ah.
Waxaa la beeray ka dib markii si wada jir ah loo kululeeyo carrada ilaa +10 ° C, sida caadiga ah, bisha May. Dhulka waa inuu si dhexdhexaad ah u qoyan yahay.
Dhirta baradho waa mid aad u jilcan oo aan aad u hooseynin meesha, sidaas darteed waxaad iyaga ku beeran kartaa duurka berriga, geedaha hoostooda, iwm. Waxaa lagu talinayaa in aan dhirta laga dhigin meelo u dhow biyaha dhulka. Marka laga hadlayo ilaalinta dabaysha, noocyada kala duwan waxaa loo diyaariyaa xaaladaha Siberian, sidaas darteed miisaanku ma saameynayo wax-soosaarkooda.
Kuwa horay u wanaagsan iyo kuwa xun
Waxaa ugu wanaagsan in la beero khudradda xididka ah ee meesha digirta, kaabajka, qajaarka, iyo bocorka horey u koray. Baradhadu waxaa la beeray dhowr sano oo isku meel ah, laakiin si ay u ilaaliyaan dhalidda, waxaa lagula talinayaa in ay beerta beerta isla markiiba ka dib markaad miro ka soo guranayso si aad u nadiifiso.
Waa muhiim! Ha beeran "Tuleyevsky" ee meesha koritaanka qorraanta, yaanyada iyo dhirta qoyska qoyska.
Ciidda waxaa loo diyaariyey in la beero horay. Waxay laba jeer qodayaan: guga iyo dayrta. Ka hor inta beerto, hubso inaad ka saarto dhammaan caws, iyo god kasta oo la gooyaa laamood oo yar yar, cawska, compost ama humus.
Qalabka beeritaanka wuxuu bilaabaa inuu isu diyaariyo 1 bil. Si arrintan loo sameeyo, u dhig lakabka ah 3 xididada meel diiran, laga ilaaliyo qoraxda tooska ah. Waxaa lagu daaweynayaa cayayaanka iyo diyaarinta si kor loogu qaado koritaanka. 3 maalmood ka hor laga beerto, baradhada ballaaran ayaa la googooyaa, si walax kastaa uu ugu yaraan leeyahay 3 indhood. Qalab dheeraad ah ayaa lagu sameeyaa qorraxda. Sida ugu dhakhsaha badan suufku u iibsado midab cagaaran, waxaad bilaabi kartaa beerto, ka hor-rusheeyaa waxyaabaha leh ash alwaax.
Qorshaha iyo qoto dheeraynta dhulka
Inta lagu guda jiro beerto, waxaa lagu talinayaa in la ilaaliyo bareegyada u dhaxeeya baradho ah 30 cm, inta u dhaxaysa saf - 70 cm Cawska waxaa loo sameeyey si qoto dheer ah 15 cm.
Daryeelka baradho ee noocyada kala duwan waa mid fudud. Waa ku filan in la sameeyo jaridda dhirta iyo hilling si joogto ah, iyo dhirta ay dareemi doonaan wanaagsan.
Baradhadu uma baahna waraabin joogto ah, waana ku filan tahay in la daboolo waligeed xilliga abaarta. Waraabinta xad dhaafka ah waxay keeni kartaa kallana yaryar.
Bacriminta ku habboon waa digada ama shimbirta. Waxaa lagu soo bandhigay ciidda qaabka la badhaxay ka dib roobka ama waraabinta. Bacriminta kiimikada ayaa ugu wanaagsan inaysan isticmaalin. Intaa waxaa dheer, haddii ciidda lafteedu waa mid bacrin ah, ka dibna bacriminta aan la isticmaali karin.
Nadiifinta joogtada ah ee ciidda waa lagama maarmaanka kaliya ee xaaladaha abaarta daran. Weeding waxaa loo fuliyaa sida loo baahan yahay, sidaas darteed haramaha ma xiro dhirta.
Baradhada waxaa loo isticmaalaa daawada dhaqanka si looga hortago cudurka. Waxa kale oo ay mudan tahay in ay dareenka ka ilaaliso cawska iyo baradhada baradhada, kuwaas oo si ballaaran loo isticmaalo guriga.
Hilling waxaa la sameeyaa saddex jeer xilli ciyaareed:
ka dib markii caleemaha koowaad;
marka caleen bilaabmayso inay safarto safka.
Inta u dhaxaysa hilling labaad iyo saddexaad waxaa lagu talinayaa in ay ku quudiyaan dhibco digaag la badhxay.
VIDEO: TARJUMAAD EE LAGU QAATO
Daaweynta ka hortaga
Sida qiyaas ka hortag ah, ka hor intaan la beeri, maadada waxaa laga daaweynayaa baradho-baradho Colorado iyo cayayaanka kale ee Prestige (1 l halkii 100kg), iyo si loo kiciyo koritaanka, by Emistim ama kiciyaha la midka ah.
Ka dib 3 bilood laga bilaabo wakhtiga beerto baradho ah, waxaad bilaabi kartaa inaad goosato marka ay dhaladooda noqdaan huruud iyo qalalan. Ka hor inta aan la dhigin, dalagga geedka ayaa la qalajiyey. Heerkulka kaydinta ugu fiican waa 3 darajo Celsius leh 95% qoyaan. Digriiga waxaa lagu talinayaa in lagu dhajiyo taageerada caws.
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida si haboon loogu kaydiyo baradho xilliga jiilaalka.
caabbinta cuduro kala duwan iyo abaaro;
La qabsiga xaaladaha cimilada ee adag
VIDEO: TUNLEVAN POTATO KA DIB MARKA Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah:
u nuglaanta nematode dahabka;
iyada oo la'aanta boron ee foomamka xidid carrada voids.
Ma taqaanaa? Barafka ugu qaalisan adduunka waa "La Bonnotte". 1 kg oo badeecadani ah ayaa laga iibsan karaa ilaa 500 oo Euro.
Baradhada "Tuleyevsky" - noocyo caalami ah. Waa wax aan wax ku ool lahayn oo tagaya oo bixiya miro fiican. Xitaa haddii aad tahay ninkii beerta nudaha leh, wax dhibaato ah kuma qabtid "Tuleyevsky".
Markii ugu horeysay waxay ku beeray noocyo yar oo baradho ah Tuleyevsky sanadkan, waxay ka soo iibsatay bandhig fagaare ah oo loo yaqaan 'Siberian Fair'. Ma aanan jecleysan dhadhanka, inkasta oo ay midho dhalisay. Iyo joornaalka ka akhriso dib u eegisyada caynkaas ah! Inkasta oo aan u malaynayo in ay jirto suurtagalnimada in qareenka Tuleyevskaya aan la siiyay wax ka duwan: Faq: Laakiin anigu ma abuuri doono baradhadan mar dambe.
"Tuleyevsky" waa noocyo kala duwan oo loo yaqaan "Resident Summer" (Ogow annaga :) :)). Guud ahaan, isagu waa mid midho dhadhan leh oo dhadhan aan ku farxin;). Cadaaladda, dadku waxay isugu soo urureen, sida xeebta, laakiin waxay u muuqatay inay tahay nooc "korodh" abuur ah.